Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ)
Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) ကဘာလဲ။
တုပ်ကွေး ဆိုတာဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း လူပေါင်း ၂သိန်းခွဲကနေ ၅သိန်းအထိ ကူးစက်နေသော တုပ်ကွေးဟာ ၁၀ရာခိုင်းနှုန်းကနေ ၁၅ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရှိပါတယ်။ တုပ်ကွေးဟာ ချက်ချင်းထဖြစ်ပြီး ၇ရက်ကနေ ၁၀ရက်အတွင်းမှာ ပျောက်ကင်းသွားကြတာများပါတယ်။ တုပ်ကွေးဟာ အန္တရယ်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ဆို ပိုတောင် အန္တရယ်ရှိပါတယ်။ လူအများအတွက်ကတော့ တုပ်ကွေးဟာ ချက်ချင်းထဖြစ်ပြီး ၇ရက်ကနေ၁၀အတွင်းမှာ ပျောက်ကင်းသွားကြသလို လုံးဝလည်း ပြန်ကောင်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အသက်အရွယ် အရမ်းကြီးသူတွေ၊ အရမ်းငယ်သူတွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားကျနေသူတွေကတော့ ပိုမိုပြင်းထန်စွာခံစားလိုက် ရပြီးသေတဲ့အထိတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
တုပ်ကွေးရောဂါဟာ လွန်စွာ အဖြစ်များပြီး အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး တုပ်ကွေး၂ကြိမ်၃ကြိမ်ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ကို ၆ကြိမ်၇ကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ တုပ်ကွေးရာသီဖြစ်တဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အဖြစ်များဆုံးပါ။ အန္တရယ်ရှိအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းအားဖြင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တုပ်ကွေးရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့ပြီး ၂၄နာရီကနေ ၄၈နာရီအတွင်းမှာ လက္ခဏာပြပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့် ၃ရက်နေ ၅ရက်အထိ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချို့တုပ်ကွေးပိုးတွေက အော့အန်၊ဝမ်းသွားစေတတ်ပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ)
အထက်တွင် မဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။
တုပ်ကွေးလက္ခဏာတွေ ပြနေပြီး အန္တရယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေနဲ့ နီးနေပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။ လက္ခဏာပြပြချင်း ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးကို ၄၈အတွင်း သောက်ထားမယ်ဆိုရင် ဖျားနာတဲ့အချိန်ကို လျော့ချပေးနိုင်ပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေ မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
တုပ်ကွေးရောဂါဟာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ယင်းတို့ကို အမျိုးအစား အေ၊ဘီနဲ့စီဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစားအေကတော့ အတွေ့အများဆုံးပါ။ ဝက်တုပ်ကွေး(H1N1)နဲ့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး(H5N1, H7N9)တို့ကို ကြားဖူးလောက်မှာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ လေကိုရှုမိတဲ့အခါမှာ ယင်းပိုးဟာကိုယ်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ တုပ်ကွေးပိုးရှိနေတဲ့ အရာဝထ္တုပစ္စည်းတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့ အခါမှာလည်း ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့လူ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ၊နှာချီလိုက်တဲ့အခါမှာ ထွက်လာတဲ့ ရေမှုန်ရေမွှားများထဲမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ရောဂါခံစားနေရတဲ့ တိရိစ္ဆာန်အသားတွေစားခြင်းကလည်း ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အချက်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ရောဂါပိုးမွှားတွေရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေမယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားနည်းနေမယ်ဆိုရင် တုပ်ကွေးအန္တရယ် မြင့်မားနိုင်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးအန္တရယ် မြင့်တက်စေတဲ့ အချက်အချို့ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်။ ၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်များ အထူးသဖြင့် ၂နှစ်အောက်များနဲ့ အသက်၆၅နှစ်အထက် လူကြီးများ
လူနေမှုပုံစံ။ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ စစ်တန်းလျားနဲ့ အခြားစုပေါင်းစပ်ပေါင်းနေထိုင်ရသည့် နေရာများတွင် နေထိုင်သော လူများ
ကိုယ်ခံအားနည်းခြင်း။ ကင်ဆာကုထုံး၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးရာတွင်သုံးသော ဆေးဝါးများ၊ စတီးရိုက်များနဲ့ HIV/AIDS တို့က ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေပါတယ်။ ထိုအရာတွေက တုပ်ကွေးမိဖို့ လွယ်ကူစေနိုင်သလို ခန္ခါကိုယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခံရနိုင်ခြေကိုလည်း မြင့်မားစေပါတယ်။
နာတာရှည်ရောဂါများ။ ပန်းနာရင်ကြပ်၊ ဆီးချိုသွေးချိုနဲ့ နှလုံးရောဂါတို့လိုမျိုး နာတာရှည် ရောဂါတွေက တုပ်ကွေးကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ထိခိုက်ခံရနိုင်ခြေကို မြင့်မားစေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားခြင်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အထူးသဖြင့် ဒုတိယနှင့်တတိယ သုံးလပတ်တွေမှာ တုပ်ကွေးကြောင့် ထိခိုက်ခံရနိုင်ခြေ မြင့်မားနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း။ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အရပ်အမြင့်အချိုး (BMI) ၄၀နှင့်အထက်ရှိတဲ့ အဝလွန်သူတွေမှာ တုပ်ကွေးအန္တရယ်မြင့်မားပါတယ်။
Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အခြေအနေတော်တော်များများမှာတော့ တုပ်ကွေးရှိမှန်း မိမိဘာသာ သိရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဖျားတက်တာနဲ့ ပင်ပန်းတာလိုမျိုး လက္ခဏာတွေကနေ သိရှိမှာပါ။ တုပ်ကွေး၏ပဋိပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ယင်းစစ်ဆေးမှုကို တုပ်ကွေးရာသီမှာ ကူးစပ်ပြန့်ပွားခြင်း ထိန်းချုပ်ဖို့ အများဆုံးအသုံးပြုတာပါ။
တုပ်ကွေးစစ်ဆေးမှုမှာတော့ နှာရည်တို့ သွေးတို့ကို အသုံးပြုပါတယ်။
တုပ်ကွေးကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါရှိမရှိကို ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုကို ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့လူတွေ၊ ကိုယ်ခံအားကျနေတဲ့လူတွေ၊ တုပ်ကွေးကြောင့်ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်ခံရဖွယ်ရှိတဲ့လူတွေအတွက် အဓိကအကြံပြုထားပါတယ်။ လူထုထဲမှာ တုပ်ကွေးတွေ့ရှိထားတယ်ဆိုရင်တော့ လူတိုင်းက တုပ်ကွေးစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Influenza(flu)child (တုပ်ကွေးဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လူအများစုကတော့ အိမ်မှာပဲ ပျောက်ကင်းနိုင်ကြပြီး ဆရာဝန်ပြဖို့ သိပ်မလိုပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကုသနည်းကတော့ အနားယူခြင်းပါပဲ။ လူတော်တော်များဟာ ပဋိဇီဝဆေးတွေက တုပ်ကွေးကို ကုသပေးနိုင်တယ်လို့ နားလည်မှုလွဲနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ယင်းဆေးတွေ သောက်သုံးခြင်းက တုပ်ကွေးကို မသက်သာစေနိုင်တဲ့အပြင် ဆေးယဉ်ပါးခြင်းဖြစ်စဉ်တွေတောင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကိုပြောပြီး ရောဂါလက္ခဏာသက်သာစေတဲ့ဆေးအား တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယင်းဆေးတွေထဲမှ အချို့က ဆေးဆိုင်များမှာ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ သက်သာစေဖို့ ပါရာစီတမောနှင့် အိုင်ဗျူပရိုဖန်လိုမျိုး အက်စပရင်မဟုတ်သည့် ဆေးများ၊ လည်ပင်းနာ၊ချောင်းဆိုးသက်သာစေဖို့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်များ၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းအတွက် နှာပွင့်ဆေးများပဲဖြစ်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးရောဂါကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
ဆေးဝါးဖြင့်မဟုတ်သော နည်းလမ်းအချို့က တုပ်ကွေးရောဂါကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အဖျားကြီးခြင်းကြောင့်ရေဓါတ်မခန်းခြောက်သွားအောင် ရေများများသောက်ပေးဖို့က ရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကြွက်သားတွေပြေလျော့စေပြီး ကိုက်ခဲမှုတွေသက်သာစေဖို့ ရေနွေးနွေးလေးဖြင့် ရေချိုးပါ။
အိမ်တွင်းရှိ စိုထိုင်းမှုထိန်းသိမ်းစက်က အသက်ရှုရလွယ်အာင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆားရည်၊ပလုတ်ကျင်းဆေးတို့ဖြင့် ပလုတ်ကျင်းလိုက်ခြင်းက လည်းပင်းနာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါတို့က တုပ်ကွေးမမိအောင်နဲ့ အခြားသူတွေကို မကူးစက်အောင် သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရာအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကိုယ်ခံအားရှိနေတာပါပဲ။
တုပ်ကွေးရှိမယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် မျက်နှာနဲ့ အများသုံးပစ္စည်းတွေ မထိခင်မှာ လက်သန့်ဆေးကို မကြာခဏအသုံးပြုပေးပါ။
အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ နှာခေါင်းဆီးတပ်ဆင်ပြီး နှာချီတဲ့အချိန်နဲ့ ချောင်းဆိုးချိန်တို့မှာ ပါးစပ်အုပ်ထားပါ။
မေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံဖြေရှင်းနည်းတွေကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor.
Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print
edition. Page 539.
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert,
R. K. (2009). The Merck manual home health
handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research
Laboratories. Print edition. Page 1241.
ency/article/000080.htm . Accessed July 9, 2016.
Accessed July 9, 2016.
Influenza Tests. https://labtestsonline.org/
understanding/analytes/flu/tab/test/ . Accessed July
Review Date: January 4, 2017 | Last Modified: